Sajhasabal.com | Home'प्रचण्ड प्रतिकात्मक परिवर्तनकाे नाम हाे, ऊ विना राजनीतिकाे पात पनि हल्लिनेवाला छैन’
-किशाेर नेपाल ।
‘प्रचण्डको आफ्नै मान्छे’ भनेर म त पटक–पटक सामाजिक संस्था र नागरिक समाजका स्वयम्भू नेताहरुबाट लान्छित भएको, फेसबुकमा खेदिएको, टुइटरमा खेदिएको, पत्रकारितामा खेदिएको मान्छे हुँ । म मानवअधिकारको नाममा मूर्दा बेचेर हिँड्ने मान्छे होइन । प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा छ– म माओवादी होइन; म उनको कार्यकर्ता होइन । अनि खेद्नेलाई पनि थाहा छ यो कुरा । तर पनि मलाई ‘सिम्बोल’ बनाएर मान्छेहरुले खेदिराखेका छन् ।
तर मलाई वास्ता छैन । म एउटा पत्रकार हुँ । कुनै पनि पत्रकारको मुख्य आकांक्षा हुन्छ– सत्ताको शीर्ष तहमा रहेका व्यक्तिसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नु र समाचार विश्लेषण गर्नु; व्यावसायिक रुपमा आफूलाई ‘फ्रेस’ राख्नु । मैले पनि त्यही गरेको हुँ । त्यो गर्दागर्दै पनि प्रचण्डसँग म आकर्षित चाहिँ छु । मैले सुरुमा प्रचण्डलाई भेट्दा देशमा बीपी कोइरालापछि भिजन भएको यही एउटा नेता हो भन्ने लागेको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि उनी अर्धभूमिगत हुँदा मैले पोखरा गएर भेटेको थिएँ उनलाई । त्यतिबेला मैले उनलाई ‘बीपी कोइरालाले यस्तो भिजन राखेका थिए, तपाईंको त्यस्तो केही छ ?’ भनेर सोधेको थिएँ । उनले भनेका थिए– ‘बीपी कोइरालाको भिजन सही छ, म त्यसमा एउटा मात्रै थप्न चाहन्छु– त्यहाँ एउटा कम्प्युटर चाहिन्छ, एक लाइन टेलिफोन चाहिन्छ । यो बीपीको भिजनमा संशोधन गरेको होइन, समयको मागअनुसार प्लस गरेको हुुँ ।’
त्यसबेला मलाई लाग्यो, यो धेरै ठूलो मान्छे हो । गोदावरीमा राज्य पुनर्निर्माणसम्बन्धी एउटा सेमिनार गर्दाखेरि मैले यो कुरा सार्वजनिक रुपमा नै भनें– प्रचण्डजी कुरा बुझ्छन्, समय–परिस्थिति बुझ्छन् तर त्यसअनुसार निर्णय गर्न सक्दैनन् । उनलाई खुइल्याउने प्रवृत्ति सुरु भयो गिरिजाबाबुले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार बनाएदेखि । रुक्मांगद कटवालले उनका विरुद्ध सेनाको स्रोत दुरुपयोग गरे । धेरैले उनको भुत्ला उखेल्ने काम पाए ।
प्रचण्डले जनयुद्धपछि आफूअनुकूल पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गरेर पार्टीलाई हाँक्न सकेनन् । उनले पार्टीभित्र झगडा मिलाउन सकेनन् । घिसिर–घिसिर तरिकाले बाबुराम मिलाउने, वैद्य मिलाउने, बादल मिलाउने गर्दागर्दै उनको जीवनको ऊर्जाशील समय सकियो । जे बचेको थियो, त्यो घरेलु र आर्थिक विवादमा थिचियो । उनका धेरै चर्चा सुनिन्छन् ।
सुमार्गीसँगको सम्बन्ध, लाइफस्टाइल, बेलाबेलामा रिसोर्टतिर जाने शोख । यी कुरा सत्य हुन् कि होइनन्, मलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एक लाखको खाटमा बालुवाटारमा सुत्यो भन्ने कुरा आयो । एक लाखको खाटमा सामान्य मानिस पनि सुत्छ, प्रधानमन्त्री किन नसुतोस् ? एक लाखभन्दा घटीमा राम्रो खाट नै पाइँदैन । एउटा सामान्य मान्छेले त पचास–साठी हजारको खाट किन्नुपर्ने महँगी छ ।
पार्टीभित्र र बाहिरका प्रचण्डका विरोधीहरुले उहाँका विरुद्ध एउटा सिस्टमेटिक प्रचार–संयन्त्र तयार पारे; त्यसमा बाबुरामजी पनि लागे, अरु तत्वहरु पनि लागे । प्रचण्डको विरुद्धमा तीन–तेह्र कतैको सम्बन्ध नभएका एकै हुन सक्छन्, एउटै आवाज निस्कन्छ दुवैतिरबाट । भाषा फरक होला । काउन्टर भ्युज दिन माओवादीभित्र कुनै संयन्त्र नै छैन ।
प्रचण्डको कुनै संयन्त्र मैले देखेको छैन । हामीले १२ वर्षे जनयुद्धको व्यवस्थापन प्रचण्डले नै गरेको भन्ने सुनेका थियौं । एउटा डरलाग्दो श्याम–श्वेत तस्बिर छापिन्थ्यो साप्ताहिक छापाहरुमा, हामी त्यसैलाई प्रचण्ड भन्ठान्थ्यौं । प्रचण्ड यति राम्रा रहेछन्, उनको र मेरो जुँगा मिल्दो रहेछ भन्ने त पछि गएर थाहा पाएको हो मैले ।
प्रचण्डले सुमार्गीसँग मिलेर ठूलो उद्योग खोलेका र माओवादीको पैसा त्यसमा लागेको छ भनेर अहिलेसम्म प्रचार भैराखेको छ । त्यसको कतैबाट पुष्टि पनि भएको छैन र खण्डन पनि भएको छैन । सुमार्गी प्रचण्डसँग र प्रचण्ड सुमार्गीसँग मिल्नुनहुने के कुरा छ र ? कुनै न कुनै नेताहरुको कुनै न कुनै व्यापारीसँग त सम्बन्ध छ नि । प्रचण्डले यो मान्छेलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ भन्ने एलिट समूहलाई पर्यो । यसलाई नसिध्याएसम्म समाजवादी आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिँदैन, प्रचण्ड नसकिएसम्म संघीयता पनि सकिँदैन भनेर नै उनलाई बदनाम गरियो । गिरिजाप्रसाद त कालकवलित भइहाले, उनलाई ढुटो बनाउनै परेन । सुशील कोइरालासहित अरु नेताहरुको ताल देखिहालियो ।
प्रतीकात्मक रुपले प्रचण्ड एउटा परिवर्तनको नाम भइदियो तर प्रचण्डले नामअनुसारको काम गरेनन् । त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको मान्छेले बादल र बाबुरामले उचाले भन्दैमा सत्ता छाड्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । नेपालमा त्यतिखेर भारतले पनि कु गर्न सक्दैनथ्यो, नेपाल आर्मीको त कुरै छाडिदिनोस्; आफ्नै राजाको डिफेन्स नगर्ने आर्मीले प्रचण्डका विरुद्ध कु किन गर्छ ? सत्ता छाड्नु उनको हतारको निर्णय थियो ।
प्रचण्डको चुनाव प्रचारको तरिका नै मलाई उल्टो लाग्यो । सडक किनारमा जम्मा भएको भीडले पिटेको ताली खाएर भोट जम्मा हुन्छ ? उनले कसैको कुरा सुनेनन् । संविधानसभाको पहिलो चुनावमा मैले माओवादी ठूलो पार्टी भएर सत्तामा आउँछ भनेको थिएँ । दोस्रो चुनावमा मैले केही बोलिनँ । मलाई धेरैले सोधेका थिए, मलाई थाहा थियो– यी डुब्दैछन् भन्ने । प्रचण्डलाई उनकै पार्टीले गाउँ छिर्न दिएन, उनी पनि गएनन् ।
चुनाव पछिको २–३ महिना त पराजयले इन्तु न चिन्तु भए– भुइँचालोले आत्तिएर होस हराएका मान्छेजस्ता । उनको होस हराएकै हो किनभने उनले नसोचेको कुरा भएको थियो । खिलराज सरकारले के गर्यो भन्ने कुरा घटनाहरुको मनिटरिङ गर्दै हिँडने यत्रा विद्वान बाबुरामलाई थाहा थिएन ?
प्रचण्डले मेरो कुरा सुन्नुभएन । दसथरीले नानाभाँती जे–जे कुरा गरे पनि प्रचण्ड नै शक्तिको केन्द्रमा छन् । मैले लेख्ने गरेको छु– यहाँ दुईवटा मात्रै पोलिटिकल इलेमेन्ट छन्– एउटा कांग्रेस र अर्को माओवादी । अहिले पनि प्रचण्डको यति धेरै विरोध किन भइरा’छ भने यतिबेला पनि पावरसेन्टर त उनै हुन् । उनले नभनीकन राजनीतिमा पात पनि हल्लिँदैन । माओवादी पार्टी अल्पमतमा छ तर ऊविना पात पनि हल्लिँदैन । म पटक–पटक भन्दै छु– माओवादी पार्टी विचौलिया राजनीतिबाट बच्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीहरु दुई धु्र्रवमा छन् । यी दुईबीचको सम्बन्धले मात्र राज्यको रुपान्तरण हुन्छ ।